Eng Fadxi Jaamac Baarud Ayaa Si Rasmi Ah U Shaaciyay In Uu U Tartamaayo Jagada Xildhibaanimada Ee Golaha Deegan Caasmida Hargeisa - www.dhanbaalnews.com
Hargeisa(Dhanbaalnews) Eng Fadxi jamac baaruud waxaa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoon yahanada ee u dhashay dalka jSL waxaa uu mudooyinkiii ugu dambeeyay ka hawl galaayay dawlda hoose ee caasimda hargeysa .
Eng Fadxi jaamac baarud waxaa uu mudadaasi uu ka shaqaynaayay waaxda M/Mooge ee magaalada hargeisa.
Fadxi waxaa uu sii rasmi ah u shaaciyay in uu yahay murashax u taagan golaha deegaanka ee caasimada hargeisa ee doorashooyinka soo socda.
Eng Fadxi ayaa hoosta ka xariiqay in ay laga maar maan tahay in golaha deeganka ee caasimada hargeisa lagu soo kor dhiyo dhalin yaro fir fircoon oo leh aqoonta iyo waayo aragnimada dawladaha hoose sidoo kale wuxuu fadxi tilaamay in uu wax weyn ka qaban doono arimaha bilicda caasimada ,waxbarashada iyo horumarinta wadooyinka iyo qorshayaal cusub uu ku hagi doono dawlada hoose.
bulshada reer somaliland ayaa inta badan saluug ka muujiya golaha deegaanka caasimada hargeisa balse fadxi taasi waxaa uu kaga jawaabay sida tan:-
„Waxaan ahaan doona qof u shaqeeya bulshadiisa ma noqon doono qof ka shaqaysta qaranka waxaann ahaan doona mid diyaar u ah in lagula xisaabtamo xilka loo igmaday hadii aad idoorataan.
Eng Fadxi jaamac baarud ayaa dhalinyarada reer somaliland ugu baaqay in ay garab istaagaan si uu u dhiiri galiyo isla markaana u rumeeyo himilada dhalinayarada somaliland oo ah in ay helaan shaqooyin.
Eng Fadxi jaamac ayaa bulshada degen koonfurta magaalad hargeisa u aragta in uu yahay qof dhalin yaro ah oo waayo aragnimo u leh dawladaha hoose ee somaliland , waxaana inta badan ay dadku aamin san yihiin marka loo eego aqoontiisa.
Sidoo kale mar aanu bulshada wax ka waydiinay aragtidooda ku aadan musharaxnimada Eng Fadxi Jaamac waxa ay noo bayaamiyeen inay si weyn u taageeri doonaan xiliga ay dhacayso doorashada goloyaashu, loona baahan yahay in la helo xildhibaano tayo leh una damqada dadkooda, isla mar ahaantaasina caasimada gaadhsiiya heer la mida caasimadaha aduunyada oo kale.
Eng Fadxi jaamac baaruud in uu yahay wiilka kaliya ee dhalin yaro ah ee u muuqda in uu wax badan ka qaban karo baahiyaha ay bulshadu ka tirsanayso dawlada hoose caasimada hargeisa oo ay ugu horayso hirgalinta shaqo abuurka dhalinyarada , dhisida iyo dayac tirka jididka weyn ee caasimada iyo kuwa kale ee dhex mara xaafada dhex dooda iyo kaabida waxbarashada dugsiyada hoose dhex ee hargeisa.
Ugu dambayntii Eng fadxi jaamac baarud waxaa bulshada magaalad hargeisa uga fadhiya isla markana uu ka doonaya in ay ugu hiiliyaan codkooda si dawlada hoose ee caasimada hargeisa ay u hesho hiilka dhalinayarada wax baratay.